Lapho Izimbadada Zamukela Izikole, Zamukela Umphakathi
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Unomthwalo wemfanelo » Lapho Izimbadada Zamukela Izikole, Zamukela Umphakathi
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Imfundo • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Investments • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Ngenkathi uGordon “Butch” Stewart evula iSandals Resort yakhe yokuqala, wayenegunya elilodwa elibaluleke kakhulu: indawo yokungcebeleka yayizodingeka ukuthi yamukele isikole emphakathini. Amalungu eqembu bekufanele awunakekele futhi aqinisekise ukuthi izikhungo kanye nabafundi banakho okudingekayo ukuze baphumelele. Lokho bekungaphezu kweminyaka engamashumi amathathu edlule, nokuqala kwenkampani ukuzibophezela emphakathini kanye nesiko lenkonzo ukuthi iSandals Resorts International (SRI) inakekele.
"Sinemithombo, ngakho-ke, sinesibopho sokwenza okuthile," kusho uStewart, uSihlalo noMsunguli weSandals Resorts and Beaches Resorts.
Namuhla, zonke izindawo zokungcebeleka ezingaphansi kweSandals Resorts InternationaI banner ziyadingeka ukwamukela izikole futhi kwezinye izimo imiphakathi yonke iqinisekise ukuthi imiyalezo yezempilo, ukuphepha, ukukhathazeka ngezemvelo, umphakathi kanye nethuba kwabelwana ngayo ngangokunokwenzeka. Ukusuka ekusizeni ukuhlinzeka ngamalebhu amasha ekhompyutha nokwakha amakilasi angeziwe ekunikezeni izifundi zabafundi abakhaliphile kodwa abaswele kanye nezinsuku zokubamba iqhaza, amaqembu e-SRI resort aqhubeka nokuhlinzeka ngokuqeqesha futhi ahlanganyele ngolwazi nezinsiza zawo nomakhelwane bawo baseCaribbean.
Izindawo zokuhlala zezimbadada emphakathini.
Ku-2007, amaSandals Resorts athola umklomelo weCondé Nast Traveler World Savers Award wohlelo lwe-Adopt-A-School nomsebenzi wabo emiphakathini yaseCaribbean. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-25 uCondé Nast ehloniphe amahhotela aphambili emhlabeni, imikhumbi yokuhamba ngezindiza, nezindiza.
Izimbadada ezidume umhlaba wonke kanye nezindawo zokungcebeleka emabhishi seziguquke zaba uphawu olulodwa kanye nezindawo zokungcebeleka eMontego Bay, eJamaica, zaba ngelinye lamagama aziwayo nokwazi ukwamukela izivakashi emhlabeni. Ngemikhiqizo emi-5 nezakhiwo ezingama-24 emazweni ayi-7 kufaka phakathi i-Antigua, i-Bahamas, iGrenada, iBarbados, iJamaica, iSaint Lucia, neTurks neCaicos, amaSandals namaBeach Resorts ungumholi ongenakuphikiswa wezikhathi zeholide zaseCaribbean futhi uhlala ezinikele kakhulu esifundeni, ezinikezela uqobo lwayo ekuthuthukisweni kwezindawo zokuvakasha okwathi ngamazwi kaSihlalo noMsunguli uGordon “Butch” Stewart, “kweqe okulindelwe” kuzivakashi, abantu ohlangana nabo, nabantu ababiza ikhaya laseCaribbean.
Umhlangano Waminyaka Yonke we-IATO Manje Ubekelwe uDisemba eThe ...